Resource Center - Jiulong milina Manufacturing Co., Ltd.
General Information ny Steel Garting
1. makarakara karazana. Izany dia ahitana ny toeram mitondra karazana (sakany sy hateviny), mitondra toeram dity ny fiara, barany hazo fijaliana dity. Ohatra, JG325 / 30/100 JG255 / 30 / 100S, sns
2. makarakara habeny, izay lavany ny sakany. Fanamarihana: ny fitarihana ny lavany mitovy amin'ny fitarihan'ny ny mitondra bar. Resahina ny tari-dalana ny androm.
3. Quantity ny makarakara.
(1) refesina amin'ny pcs raha ny baiko dia tsy dia lehibe.
(2) refesina amin'ny metatra tora-droa, raha ny habeny dia sarotra makarakara, & ny tarika Ireto no famantarana ho m2.
(3) norefesiny koa ny lanjan'ny raha ny makarakara habeny dia sarotra, sy ny tarika Ireto no famantarana ho kg. Nanamarika hoe: ny lanjan'ny makarakara ho caculated araka ny YB / T4001.1-2007.
4. asio fehy makarakara. Ny fisotroana miaraka amin'ny fisaka mitovy habe ny mitondra fisotroana tsy ampy ho an'ny asio fehy makarakara. Asio fehy manokana na koa asio fehy tsy ho hita araka ny fanamafisana atao amin'ny mpividy & mpamatsy.
5. Serface fitsaboana. Hot-mandroboka galvanizing no ampiasaina amin'ny ankapobeny, & manao ambonin'ny manao fitsaboana na tsy mety hanaiky izay mpividy 'fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra.
1. Type ny makarakara. JG255 / 30/100 & JG325 / 30/100 ho kevitra teo aloha.
2. Size ny handia., Izay lavany ny sakany. Fanamarihana: ny fitarihan'ny hodiavinao dia manondro ny fitarihan'ny sakan'ny tohatra.
3. Quantity ny handia. Manosihosy ho nokajiana avy pcs.
4. tena toetrany fitsaboana. Hot-mandroboka galvanizing no ampiasaina amin'ny ankapobeny, & manao ambonin'ny manao fitsaboana na tsy mety hanaiky izay mpividy 'fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra.
5. momba ny lafiny takela-handia, dia jereo ny sary ampiarahina. Ary azafady jereo ny tabilao hahita ny fifandraisana eo sakany & lavaka dity ny handia.
Ny lafiny takela mandany 65 × 5 MM mitondra bar. Izany dia midika hoe mitred ihany rehefa hangataka amin'ny mpanjifa.
Mitondra bara dity (MG)
Recommended Sakany (MG)
Heba ny manamboatra Hole (MG)
Vita vy makarakara feno fehin-kibo, & hazo matetika ampiasaina amin'ny matting, ka izany mety ny entan'izy. Fa mainty makarakara, fisaka fisotroana azo fonosana.
Fanamarihana: Ny fonosana ihany koa ny hisian'ny araka ny mpanjifa 'fepetra amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra.
Malagasy Package NY noforonina Panel
Package HO AN'NY fantsona
Malagasy Package NY STAIR hanitsaka
PALLET fonosana NY STANCHION
PALLET fonosana NY makarakara
PALLET fonosana HO AN'NY tohatra